Rita, Writing for My Sake!: September 2008
ချစ်သူ မသိသော အလွမ်းများ
လူကငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်နေပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်တွေလွင့်နေတယ်။
လွမ်းတယ်ဆိုတာလှိုင်းတွေလိုပဲ…တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူကို တိုက်စားသွားတာ…
တစ်ပတ်ကြာမယ် လို့ မင်းပြောခဲ့သလားဟင်…
ဒီလိုနဲ့ပဲ အလွမ်းတွေက အဖျားတတ်သလို တငွေ့ငွေ့ တက်လာတယ်…မတွေ့ဘူးဆိုတာ သိရက်နဲ့လဲ ဆက်စောင့်နေမိတယ်…
ကိုယ့်စိတ်တွေ တုန်ခါပြီး ပြိုကျတော့မတတ်ပဲ…ကိုယ်ဘာလုပ်ရမလဲဟင်…
အတူဖြေခဲ့ဖူးတဲ့ English Placement Test တစ်ခုကို ပြန်ဖြေရမလား…
မင်းတက်ခိုင်းတဲ့ သင်တန်းတွေ အကြောင်း ဖတ်နေရမလား…
မင်းပြန်လာရင် ဖတ်ဖို့ ကဗျာ တစ်ပုဒ် ပဲရေးနေရမလား…
ဘယ်လိုလုပ်ရင် ဒီအလွမ်းတွေက သက်သာရာရလိမ့်မလဲ…
တွေ့နေကျနေရာမှာ အတူလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ကြည့်ရင် အလွမ်းပြေလိမ့်မယ်လို့ ကိုယ်မယုံကြည်ပါဘူး…
အလွမ်းပြေ ဆိုတာမှန်သမျှဟာ ပိုပြီး လွမ်းဖို့တွေချည်းပါပဲ…
ကိုယ်ရေးတဲ့ စာတွေကို၊ ကိုယ့် ကဗျာတွေကို… နားမလည်ဘူးပဲ မင်းအမြဲပြောတတ်တော့…ခု ကိုယ်က လွမ်းတယ်ပြောလဲ မင်းနားလည်ပါ့မလား ထင်မိတယ်…
ကိုယ်လွမ်းနေတဲ့သူကို ကိုယ့်အနီးနားမှာ ရှိနေစေချင်တဲ့…
မျက်စေ့အောက်မှာ အမြဲ မြင်တွေ့နေချင်တဲ့ ဆန္ဒကိုခေါ်တာပဲ…
ဒီလိုပြောလိုက်ရင်… ကိုယ့်အလွမ်းတွေ သိပ် ပေါ့ ပျက် သွားမယ် ဆိုတာ သိပါတယ်…
နှလုံးသားချင်း မနီးရင်တော့ အတူတူရှိနေလဲ လွမ်းရတာပါပဲ…
တခါတခါဆို ကိုယ့်မျက်စေ့ အောက်မှာ မင်းရှိနေရက်နဲ့လဲ ကိုယ် လွမ်းနေခဲ့ရဖူးတယ်…
ကိုယ် ချစ်ခင် တွယ်တာတဲ့သူနဲ့ စိတ်ဝိဉာဉ်ချင်း နီးစပ်နေချင်တဲ့ ဆန္ဒ ပါပဲ…
ခုချိန်မှာ မင်းဘာတွေ လုပ်နေမှာလဲ…
ဘယ်သူ့ အကြောင်းကိုတွေးပြီး … ဘယ်သူနဲ့ အတူ ရှိနေမှာလဲ…
အတွေးတွေ အများကြီး မတွေးပါနဲ့ လို့ မင်းပြောဖူးတာ ပြန်သတိရမိတယ်…
ကိုယ့်မှာ တွေးနေဖို့ အချိန်တွေ မရှိတာတောင် တော်တော်ကြာပါပြီ…
ဒါပေမယ့် ခုတော့ ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်ဘူး…
မင်း အကြောင်းတွေက အလိုလို ရောက်လာတယ်…
အသည်းနှလုံး နဲ့ ဦးနှောက်က နီးနီးလေးပါပဲ…
ရင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အရာတွေက အတွေးထဲကို လွယ်လွယ်နဲ့ ရောက်သွားတတ်တာပဲ…
လွမ်းနေတဲ့ အချိန်မှာ… ကိုယ်လွမ်းနေတဲ့သူ ဘာများလုပ်နေမှာပါလိမ့် လို့ တွေးရတာ ကိုယ့်အတွက်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
ဒါပေမယ့်… မင်းပြန်လာတဲ့အခါ… မပြောဘဲ ကိုယ်ပြန်မမေးပါဘူး…
သံသယတွေနဲ့ မေးတယ်လို့ သံသယဝင်နေဦးမယ် ဆိုရင်… ကိုယ့်အလွမ်းတွေ ညစ်ထေးကုန်ပါ့မယ်။
အလွမ်းတွေက လွတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်…
ဒီနေ့ကိုယ် Baldwin Library ကို သွားတယ်…
MicroStation သင်တန်းကို သွားတယ်…
တွေ့နေကျနေရာကို ရောက်တော့ မင်းရှိမနေဘူး…
မင်း ရှိမနေတဲ့ အခါ အရာရာဟာ လွမ်းစရာပဲ…
မင်း ဘယ်တုန်းကမှ ရှိမနေခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာတွေကတောင် ကိုယ့်အတွက် လွမ်းစရာပဲ…
မင်းနဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ စကား မစပ်မိခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခု ကတောင်.. လွမ်းစရာပဲ…
ဘာတစ်ခုမှ မတိုက်ဆိုင်ပါဘဲနဲ့လဲ လွမ်းစရာပဲ…
ဒီတစ်ခါ မင်းနဲ့ ပြန်တွေ့ရင်တော့ ပြောပြရဦးမယ်…
မင်းရဲ့ နှလုံးသားမှာ ချည်တိုင် တစ်ခုရှိနေတယ်...
အဲဒီ ချည်တိုင်မှာ ကြိုးတစ်စ ရှိတယ်…
အဲဒီ ကြိုးရဲ့ အဆုံးမှာတော့… ကိုယ့် အသည်းနှလုံး ရှိပါတယ်…
တကယ်တော့ ကိုယ် မသိတတ်ခဲ့တာပါ…
ကိုယ့် ရင်ထဲမှာက ကြိုးတစ်စ ယှက်သမ်းပြီး…
သံယောဇဉ် တွေ အမျှင်တန်းနေခဲ့တယ် ဆိုတာကိုပေါ့...
(စုဗူးမှာ တင်ပြီးသား post အဟောင်းပါ.. 2008 Jan တုန်းက တင်ခဲ့တာ.. )
Posted by Rita at 9/30/2008 11:39:00 PM 1 comments Links to this post
Labels: Diary, Essay, Feeling, Love, မောင်
Posted by Rita at 9/28/2008 12:39:00 AM0comments Links to this post
Feeling in Singapore!
မင်းခြေရင်းကို တို့ထိတဲ့ အခါ
Posted by Rita at 9/13/2008 09:16:00 PM 1 comments Links to this post
ကျွန်မဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေ့လွယ်ပျောက်လွယ် ရှိလွန်းသူ လို့ အရင်က ထင်ခဲ့မိပါတယ်...
၉ တန်းအောင်ပြီးကတည်းက မိသားစုနဲ့ အဝေးမှာ အဒေါ်ဖြစ်သူနဲ့ နေလာခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားကို တစ်ယောက်တည်း ထွက်လာခဲ့တဲ့ထိ (တစ်နှစ်တစ်ခါ မှန်မှန် အိမ်ပြန်သော်ငြား) လွမ်းလှချည်ရဲ့ တမ်းတလှချည်ရဲ့ တခါမှ မရှိခဲ့ပါ... ဇာတိရပ်ရွာကို ချစ်ပေမယ့်လည်း အဲဒီမှာ ကျွန်မဘ၀ မရှိဘူး လို့ ခံယူသူဖြစ်ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ခုတော့ ငယ်ငယ်က အကြောင်းတွေကို ခဏခဏ သတိရနေမိတယ်...
ပိုင်နက်တစ်ခုတည်းရဲ့ အောက်မှာ ရှိစဉ်တုန်းက မထူးခြားခဲ့တဲ့ ကျွန်မမွေးဖွား ကြီးပြင်းခဲ့ရာ နေရာက အငွေ့အသက်တွေဟာ မိုင်ပေါင်းများစွာ ဝေးတဲ့ ပင်လယ်ရပ်ခြား ဒေသတစ်ခုကို ရောက်ခါမှ အရှိန်ပြင်းပြင်း လာရောက်ရိုက်ခတ်နေပါတယ်...
ကျွန်မအာရုံထဲကို ပထမဆုံး တိုးဝင်လာတဲ့ အရိပ်တစ်ခု ကတော့...
ဖေဖေရယ် မေမေရယ် ကျွန်မရယ် စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ ညဘက်ကြီး တနေရာကိုသွားကြတယ်..
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကျွန်မဟာ မေမေ့ကို သိပ်တွယ်တာတာပဲ...မေမေ စက်ဘီးနောက်မှာ ပါလာတယ်မှန်း သိနေပေမယ့်..ရှေ့ခုံကနေ လက်နောက်ပြန်ပြီး မေမေ့လက်ကို လှမ်းကိုင်ထားတတ်တယ်... စက်ဘီးရှေ့ခုံမှာ ထိုင်ပြီး လိုက်တဲ့ ၃, ၄ နှစ်အရွယ်တုန်းက ဆိုပေမယ့် အဲဒီတုန်းက ကျွန်မ စိတ်ထဲမှာ မေမေ မတော်တဆ ပြုတ်ကျ ကျန်နေခဲ့မလားလို့ စိုးရိမ်စိတ်ရှိနေခဲ့မိတာကို ခုချိန်ထိ မှတ်မိနေပါတယ်...
(အဲဒီလို စိုးရိမ်တတ်တဲ့ ကလေးမလေးဟာ အသက် ၁၆ နှစ်လောက် အရောက်မှာ အိမ်နဲ့ဝေးရာကို ထွက်ခဲ့ပြီး အသိုက်အ၀န်း အမျိုးမျိုးမှာ ဘာကိုမှ တမ်းတမ်းတတ သတိမရဘဲ ဘယ်လိုများ နေတတ်နိုင်ခဲ့ပါသလဲ)
အညာမှာ မိုးရွာပြီးရင် ရေအိုင်တွေ နေရာအနှံ့ ကျန်နေခဲ့တတ်တယ်...အဲဒီ ရေအိုင်တွေပေါ် ဖေဖေ စက်ဘီးဖြတ်နင်းတဲ့အခါ ထွက်လာတတ်တဲ့ ရေသံကို ကျွန်မက သိပ်သဘောကျတယ်...ဒါကို ဖေဖေကသိတော့ ရေအိုင်ရှိတဲ့ နေရာက တမင်ဖြတ်နင်းပေးတတ်တယ်...
မေမေ့လက်ကို ဆွဲကိုင်ထားရင်း ဖေဖေပြောတဲ့ စကားတွေနားထောင်ရင်း စက်ဘီးရှေ့ခုံလေးမှာ ထိုင်လိုက်ခဲ့တဲ့ အဲဒီ ပုံရိပ်ကလေးဟာ ခုတလော ကျွန်မအာရုံထဲကို မကြာခဏ ၀င်ဝင်လာတဲ့ အရိပ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
ဘ၀ဟာ ရထား တစ်စင်းလိုပဲတဲ့ .. ဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပြီးတဲ့ နေရာတွေကို ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်လှည့်လို့ မရနိုင်တော့ဘူးနော်...
Posted by Rita at 9/07/2008 09:19:00 PM3comments Links to this post
Labels: childhood, me, remembrance
Posted by Rita at 9/07/2008 08:42:00 PM3comments Links to this post